URoy Galán: ungubani futhi yiziphi izincwadi lo mbhali azibhalile | Izincwadi Zamanje
Umthombo wesithombe uRoy Galán: Elle
Uma kukhona omunye wababhali abaziwayo okungukuthi, ngaphandle kokungabaza, uRoy Galán. Lo mbhali, umbhali wephephabhuku, onethonya futhi owesifazana usesimweni kakhulu. Kungenzeka nokuthi umazi ngoba ufunde okuthile ngaye noma ubone okuthile ezinkundleni zokuxhumana noma ngisho nakuthelevishini.
Kodwa futhi kungenzeka ukuthi awumazi, futhi ngenxa yalokhu sizozama ukukulandisa ngubani uRoy Galán, ubhala kanjani nokuthi ubhale ziphi izincwadi. Sizoqala?
1 Ngubani Roy Galán
1.1 Ukuqala komsebenzi wakho
1.2 URoy Galán njengomuntu wesifazane
2 Izincwadi zikaRoy Galán
Ngubani Roy Galán
Into yokuqala okufanele uyazi ngoRoy Galán ukuthi, empeleni, akalona igama lakhe langempela. I- Igama eligcwele lalo mbhali nguRoy Fernández Galán. Kodwa-ke, wakhipha isibongo sakhe sokuqala ukuze abeke esokuqala kuqala. Ngakho-ke, yethulwa kanjalo.
Wazalwa ngoDisemba 22, 1980 eSantiago de Compostela kepha, yize azalelwa eGalicia, iqiniso ukuthi iningi lobuntwana bakhe alichithelwanga lapho, kepha eCanary Islands. Futhi, umndeni wakhe akuwona ngempela umndeni wakho ojwayelekile; Uvela emndenini okhulisa izingane futhi kungekudala wabhekana nokulahlekelwa ngomunye womama wakhe, uSol, owashona eneminyaka eyi-13 kuphela. Ngakho-ke, wayehlala nonina kuphela, uRosa.
Futhi, kufanele wazi ngalo mbhali ukuthi unodadewabo oyiwele, uNoa Galán.
Ezingeni lemfundo, URoy Galán wafunda ezomthetho e-University of La Laguna waphothula izifundo zakhe ngonyaka wezi-2003. Usebenze iminyaka eyi-11 ekuphathweni kukaHulumeni waseMadrid kepha, ngo-2013, isiphazamisi sokubhala samthwalisa kanzima futhi waqala ukuzinikela ngokuphelele kulo msebenzi.
Ngaphezu kwalokho, ku-2017 wayesohlwini lwe-igoñigo Errejón kwiCitizen Assembly of Podemos, naku-2019 ohlwini lweMore Madrid eMkhandlwini Wedolobha laseMadrid noManuela Carmena.
Ukuqala komsebenzi wakho
URoy Galán akayona indoda egxile ezincwadini. Inezici eziningi. Futhi eyinhloko ngeyombhali. Kuyaziwa ukuthi wayengumfundi eCanarian School of Literary Creation emihlanganweni yokufundisana ngamanoveli, izinkondlo, izindaba ezimfishane, ukuboniswa kwesikrini, ukuhlaziywa kwefilimu ... kanye nezifundo zeLitaryary Creation, Liberation of Expressive Resources noma nakuVademecum Yomlobi .
Ugqame kakhulu esikoleni waze wafundisa izifundo ngezihloko ezahlukahlukene yena.
Ngesikhathi sokuqala ashicilela incwadi kwaba yiminyaka emithathu egxile ekubhaleni, nge-Unrepeatable. Kodwa-ke, kuyaziwa ukuthi, eCanarian School of Literary Creation, wabhala uchungechunge lwezindaba emdlalweni othi «Futhi ngaleyo ndlela kuzoba unomphela», ndawonye nabanye ozakwabo.
Ngo-2019 wathola i-Krámpack Award kwi-Extremadura International LGBT Festival.
Yena ngokwakhe uchaza indlela yakhe yokubhala ngokuthi "elula", ngaphandle kweqiniso lokuthi ukuthola lowo mbhalo ofinyelela kubantu ukuphakamisa ngaphakathi ukungabaza kanye nezingxabano ubedinga ukuqeqeshwa okuhle ukwenza lokho. Ungomunye wababhali oxuba ukubhala nepolitiki, ukubheka lokho ukubhala "kuyinto yezombusazwe."
Ngaphezu komsebenzi wakhe njengombhali, ubuye abe ngumlobi wephephabhuku. Eqinisweni, usebenzisana nephephabhuku i-BodyMente, ephephandabeni ledijithali i-La gaze ejwayelekile futhi unesikhathi sokubamba iqhaza kuwebhusayithi yeLaSexta.
Ku-2013, lapho ethatha isinqumo sokuzinikela ekubhaleni, uRoy Galán wenza iwebhusayithi ye-Facebook. Kube ngumsebenzi wakhe ukuqeda izifundo zeCommunity Manager futhi waqala ukubhala ngazo. Into angayekile ukuyenza, hhayi kuFacebook kuphela, kepha nakuTwitter naku-Instagram. Futhi kufanele wazi ukuthi konke akubhalayo kuyabonwa futhi kwabelwane ngakho yizinkulungwane zabantu, yingakho-ke esengumpetha.
URoy Galán njengomuntu wesifazane
Esinye isizathu esenza ukuthi uRoy Galán aziwa ngesakhe isitatimende esidlangalaleni sabesifazane, kanye nozakwabo wesifazane. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ezincwadini zakhe ukhuluma ngobufazi, kanye nakwizinkundla zokuxhumana nasezindabeni azishicilela kwabezindaba.
Empeleni, wabamba iqhaza encwadini eyabhalwa nguNuria Coronado, Men for equality njengoba kungomunye wamadoda okukhulunywe ngawo.
Izincwadi zikaRoy Galán
Ugxile engxenyeni yakhe yezincwadi, uRoy Galán unezincwadi eziningana emakethe. Owokuqala wabo, Irrepetible, washicilelwa e2016 nendlu yokushicilela ye-Alfaguara. Kodwa-ke, bekungeyona eyokugcina kubo, kepha inezinye eziningi.
Como izincwadi zakho ine:
Akekho ngaphakathi kuwe.
Kwenze kungabonakali njengothando.
Iningi lazo libhalwe nendlu yokushicilela ye-Alfaguara, ngaphandle kokuthi Kwenze kungabonakali njengothando noLas alegrías abakwenze nge-Ink Cloud noContinta onami ngokulandelana. Ngaphezu kwalokho, futhi yibo kuphela abashicilela ngonyaka ofanayo ngoba uvame ukukhipha incwadi entsha kanye kuphela ngonyaka.
Ngaphezu kwezincwadi zokubhala kwakhe, naye futhi ushicilele emisebenzini yokusebenzisana, njengoba zinjalo:
(h) thanda umona 3 nokuba necala.
(h) 4 ukuzithanda.
Ngaphandle kokukhohlwa incwadi ayikhiphe neCanary Islands School of Literary Creation, «Futhi ngaleyo ndlela kungaba phakade».
Manje njengoba usumazi uRoy Galán kancane, ingabe uyalokotha ube nezincwadi zakhe?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » URoy Galán